Home Wararka Baarlamaanka Puntland oo laga yaabo in uu keeno Mooshin ka dhan ah...
Iyadoo uu maanta furmayo Kal-fadhiga 48-aad ee Baarlamanka Puntland, ayaa waxa soo baxaya guux ku saabsan abaabulka mooshin ka dhan ah heshiiska DP World ee dekedda Boosaaso. Xildhibaanno ka tirsan Baarlamanka, oo la soo xiriiray Puntland Post, islamarkaana ka gaabsaday in magacyadooda la xigto ayaa sheegay in ay u-diyaar-garoobayaan mooshin ka dhan ah heshiiska DP World.
Xildhibaannada ayaa ku doodaya in muddada fulinta heshiiska DP World ee lagu heshiiyay ahayd laba sano oo ka bilaabata maalintii la saxiixay 6 April 2017, balse afar sano kadib aysan waxba ka fulin heshiiskaas, sidaas darteedna ay mooshin ku burinayaan.
Dhinaca kale, xildhibaanno taageersan madaxweyne Deni ayaa aaminsan in arrinta DP World looga dambeeyo xukuumadda, maadaama ay tahay shaqo u taalla laanta fulinta ee dowladda (Executive branch of the government). Waxa xusid mudan, in aan weli la soo bandhigin qodobada Ajandaha Kal-fadhiga 48-aad ee Baarlamanka, kaas oo u baahan marka hore in la ansixiyo, si loogu shaqeeyo.